Wareegidda Webka Wareegga ee Barnaamijka Ka Baxsan
Haddii aad bogsaneyso boggaga internetka ee Python, fursadaha waa inaad hore u tijaabisay httplib iyo
codsiyada urllib. Selenium waa qaab istiraatiiji ah oo Python ah oo isticmaala bots si loo xoqo bogaga internetka. Dhamaan adeegyadan ma bixiyaan natiijooyin lagu kalsoonaan karo; sidaas, waa inaad isku daydaa kordhinta soo socota si aad shaqo u hesho:
1. Xogta Wareega:
Waa kumbuyuutar caan ah; Xogta Wareega Xogta Xogta ee laga helo bogagga shabakadda aasaasiga ah iyo kuwa sare. Barnaamijka iyo codsadayaashu waxay beegsan karaan tiro badan oo ah goobo firfircoon, bogag warbaahineed oo bulsho, nambarada safarka iyo wargeysyada. Xogta waxaa la uruuriyaa oo la jajabiyaa sida ku qoran fariimahaaga, natiijooyinkana waxaa lagu kaydiyaa qaababka CSV, JSON, iyo XLS. Waxa kale oo aad ka soo dejisan kartaa bogga qayb ahaan ama guud ahaanba qaabka liisaska ama jaantusyada. Data Scraper ma aha oo kaliya ku habboon barnaamijyadeeda laakiin sidoo kale waxay u fiicantahay barnaamijyada non-programmers, ardayda, freelancers, iyo culimada. Waxay qabataa hawlo tiro badan oo isku xoqan waxayna kaydinayaan waqtigaaga iyo tamartaada.
2. Web Diggers:
Waa kormeer dheeraad ah oo Chrome ah; Web Scraper wuxuu leeyahay interface-saaxiibtinimo oo u ogolaanaya in aan si sax ah u abuuro sitemaps. Iyada oo la kordhinayo, waxaad ku safri kartaa bogagga internetka ee kala duwan oo xoqin karta dhamaanteed ama qayb ahaan. Web Scraper wuxuu ku yimaadaa labada lacag oo bilaash ah oo lacag ah, waana ku haboon yahay barnaamijyadlayda, websaytka, iyo bilowga. Waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi oo kaliya si ay u xoqdo xogtaada una soo qaadato dariiqaaga adag.
Tani waa mid ka mid ah fidinta Firefoxka caanka ugu caansan; Gawracatadu waa shey lagu kalsoonaan karo oo awood leh oo laga helayo adeegga macdanta. Waxay leedahay interface user friendly saaxiibtinimo iyo macluumaad ka soo miiska iyo liiska online. Xogta ayaa markaa loo beddelaa qaabab la aqrali karo oo la isku bedeli karo. Adeeggani wuxuu ku habboon yahay barnaamijyadana wuxuu udub dhexaadiyaa internetka iyadoo la isticmaalayo XPath iyo JQuery. Waan nuqul ka dhigi karnaa xogta Google Docs, XSL iyo faylasha JSON. Xirfadaha iyo sifooyinka Gaashaanku waxay la mid yihiin soo dejinta. io.
Waa ku haboon tahay shirkadda iyo barnaamijyadaba; Parsehub ma aha oo kaliya Firefox extension, laakiin sidoo kale waa shabakad wacan oo qashin ah iyo qalab taran. ParseHub waxay isticmaashaa tiknoolojiyada AJAX iyo goobaha xoqida iyada oo dib loo soo celiyo iyo koobiyaal. Waxay akhrin kartaa oo u bedeli kartaa dukumiintiyada kala duwan ee waraaqaha macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan xaaladaha daqiiqadaha. Marka la soo dejiyo oo la hawlgalo, ParseHub waxay fulin kartaa tiro ka badan xog xogta hawlaha isku mar. Codsigiisu wuxuu ku habboon yahay Mac OS X, Linux iyo Windows. Nidaamka bilaashka ah wuxuu qabtaa ilaa shan iyo toban mashruuc, iyo qorshaha lacagta loo bixiyo wuxuu noo ogolaanayaa in aan qabano in ka badan 50 mashruuc mar Source .